Myanmar Monk Student Association: ငွေရဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်သော ဘုန်းကြီးများကြောင့် ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်ရကြောင်း သီရိလင်္ကာ မှ သံဃာတစ်ပါး မိန့်ကြား ( ပေးစာ - ၅၇ )
ငွေရဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်သော ဘုန်းကြီးများကြောင့် ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်ရကြောင်း သီရိလင်္ကာ မှ သံဃာတစ်ပါး မိန့်ကြား ( ပေးစာ - ၅၇ )
11:14 Myanmar Express Group5comments
ဦးဇင်း က ယခုလောလောဆယ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင်နေတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးပါ.. ဒကာ သို့မဟုတ် ဒကာမတို့ ဝက်ဆိုဒ်ကို ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တာပါ. တခြားနိုင်ငံရေး ဝက်ဆိုဒ်တွေလည်း ဖတ်ပါတယ်. ဦးဇင်းအမှန်တကယ်အကြောင်းအရာလေးတွေ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကလေးတွေကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ မတင်ပြခင်မှာ ဦးဇင်းကဘယ်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအလုပ်တွေကိုမှ စိတ်မဝင်စားသလို နိုင်ငံတော်က ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်း စိတ်မဝင်စားပါဘူး။။ ဦးဇင်းက အသက်ခု ၂၉ နှစ်ပါ။ ဘုန်းကြီးဖြစ်တော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုင်တာပဲ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဦးဇင်းသီဟိုကို စာသင်ဖို့ရောက်လာတာ ကြာပါပြီး ယခုလည်း သင်ကြားနေဆဲပါ။ ဟိုတုန်းက စရောက်တုန်းကတော့ နားမလည်ပါဘူး။။ နိုင်ငံရေလုပ်တဲ့ ကိုယ်တော်တွေက အတင်းခေါ်တယ် ပြီးတော့ ဘုရားဖူးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ဦးဇင်းတို့ အသစ်ရောက်လာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေခေါ်ပြီး.. လမ်းလျောက်ကြမယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောပါတယ်. ပြောတော့လည်း အမှန်တရားကို မသိသေးပါဘူး။။ လမ်းတွေပါတွေလျောက်ပြိးမှ သူတို့က ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ဘာညာနဲ့ ပြိးလည်းပြိးရော နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်နေ့က သံဃာဘယ်လောက် ဦးဆောင်ပြီး ဘာအတွက် လမ်းလျောက်ကြတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးသတင်းစားတွေထဲမှာ ထည့် ပြီး ဝေဝေဆာဆာကြေငြာတော့မှ သိရတာပါ. ဥိးဇင်းတို့ ကို အသုံးချကြပါတယ်။ အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်တော် တွေမနည်းပါဘူး ဒီမှာ။
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်း သူတို့ကို တခြားနိုင်ငံတွေ ငွေပေးပါတယ်။ ဥိးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မဝင်းစားပါဘူး။။ ယခုလက်ရှိ သီရိလင်္ကာမှာ စာသင်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ အကုန်ဆို ၂၅၀ ကျော်နဲ့ သီလရှင် ၁၇ ပါးပါတ်ဝန်ကျင်လောက်ရှိမယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်တွေက အများဆုံး ၁၀ ပါပါး။ တခြားသူတွေကိုတော့ ဘာကိစ္စရှိ လို့ လာကြပါ..ဘာညာခေါ်ပြီးမှ သူတို့က ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြ ပြီးလည်းပြိးလည်းပြီးရော အင်တာနက်မှ သူတို့တွေက မကျေနပ်လိုပါညာဆိုပြီါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒ်ိလို သူတို့လုပ်လို့လည်း ဒီမှာ ပြသာနာတွေ မကြာကြာတက်ကြပါတယ်။ အများစု ကိုယ်တော်တွေက လုံးဝဝါသနာမပါကြပါဘူး။
သီရိလင်္ကာကျောင်းသားများဘလော့ဆိုပြီး ရှိပါတယ် ( http://www.lankamsma.org/) . ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဥဲီးဇင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကတော့.. သူတို့နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေက ညနေခင်တစ်ခုမှာ မြန်မာကျောင်းရဲ့ ဗောဓိပင်အောက်မှာ ထိုင်ခုံးတွေချပြီး စည်းဝေးကြပါတယ်။ ဦးဇင်းလည်း အဲဒီတုန်းက ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ရပ်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်။ သူတို့ နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲကို မကြေနပ်ကြောင်း စည်းဝေးနေတဲ့ ပုံတွေကို ဒီကနေ သံဃာတပ်ပေါင်စုထံကို ဓါတ်ပုံပြရမယ်တဲ့ စည်းဝေးနေတဲပုံတွေကို.. သူတို့တွေပဲ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြပြုကြနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အလံတစ်ခုကိုမီးရှိုးလိုက်ကြတယ်။။ အလံက တစ်မျိုးဖြစ်နေတော့ ဘေးက သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကိုမေးလိုက်တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကအလံလည်းလို့ .. သူငယ်ချင်းက ပြန်ပြောတယ် မြန်ိမာအလံတဲ့။ ဦးဇင်းက ဦးဇင်းသိတဲ့ အလံက စပါးနှံပါတဲ့ အလံခုက ဘယ်လိုပုံလည်းဆိုတော့ ပြောင်းထားတာ ကြာပြီးလို့ ပြောတယ် . ဦးဇင်းအဲဒီအချိန်အထိ လုံးဝကိုမသိတာ အလံပြောင်းလားမပြောင်းဘူးလားဆို။။
သီရိလင်္ကာ မှ ဘာသာရေးမလုပ်ပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်သူ ဘုန်းကြီးများ ငွေရဖို့ နိုင်ငံတော်အလံကို မီးရှို့ကြစဉ်
တော်တော်လေးကို စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။။ မိမိနိုင်ငံတော်အလံကို မီးရှို့ဖျက်စီးတဲ့ သူတွေက လူမဟုတ်ပဲ ဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့.. ဥိးဇင်းတကယ် ဝမ်းနည်းသွားမိတယ်။ ပြိေးတာ့ သူတွေပဲ ဘယ်နိုင်ငံကတော့ ငွေဘယ်လောက်ရတယ်။။ ဘာညာနဲ့ တွက်နေကြတယ်။။
စာလည်းသိပ်မရေးတက်ဘူး။။ တကယ်လို့ စာလုံးတွေ အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင် ပြန်ပြိးပြန်ဖတ်ပေးကြပါ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ သီရိလင်္ကာမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ ဘုန်းကြီး ၁၀၀ မှာ ၉၉ သည် နိုင်ငံရေးကို လုံးဝစိတ်ဝင်စားသူများမဟုတ်ပဲ စာကိုသာ သီးသန့် လာရောက်သင်ကြားနေတာပါ။။ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အများကြီးဆိုတာက သူတို့တွေ လုပ်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လုံးဝကိုမသိလိုက်ပဲ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခံလိုက်ကြရတာရှိပါတယ်။။
အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ မေးပါ သီးသန့်ကိုဖြေကြားပေးပါမယ်။။ အတိအကျကိုပြောပေးပါမယ်.. သူတိုလုပ်ရပ်တွေက အောက်တန်းကျတယ်.. ငွေပေးတာယူပြိး ဘုန်းကြီးတွေကို ခုတုံးလုပ်တယ်။ လုပ်သူက အနည်းစုပါ။။
ဦးဇင်းရေးထားတဲ့စာကို ပြင်ဆင်ပြီး ဒကာကြီးတို့ ဘလောမှာ အများမြင်သာအောင်တင်နိုင်ပါတယ်။။ သူတို့လုပ်ရပ်တွေကို ဦးဇင်းက အတွင်းကျကျအကုန်သိပါတယ်။ ကြည်ညိုလိုမရပါဘူး။။
ဦးဇင်းရဲ ဒီအကောင့်ကိုတော့ လုံးဝဖေါ်မပြပါနဲ့ လိုတောင်းပါတယ်..
( စာပို့ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား၊ လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ဘုရား၊ ဘာသာရေး မညိုးနွမ်းအောင်နဲ့ သံဃာတွေကို လူတွေက အကြည်အညိုမပျက်စေဖို့ အချင်းချင်းလည်း တက်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဘုရား - MEG )
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Sunday,4March 2012